Ny Semalt Expert dia manome torolàlana 10-dingana ho an'ny fampiroboroboana ny e-commerce
SEO sy ny varotra amin'ny sehatra dia mifampiankina. Na izany aza, rehefa voalamina sy ampiharina tsara,Ny votoatiny dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fikarohana Noho izany, ahoana no ahafahanao mampifanaraka ny fepetra SEO amin'ny famoronana votoaty?
Mankanesa amin'ireto fitsipika volamena folo ireto, omen'i Artem Abgarian, Mpitarika Success Success Manager Semalt Fandraisan'anjaran'ny asa fanompoana.
1 - outdoor metal table set. Fantaro izay tadiavin'ny mpanjifa.
Ireo mpivarotra am-pahombiazana dia haingana amin'ny fikarohana ny fikarohana ara-tsakafo mba hamaritana ny 'mila. Fomba hafa maimaim-poana sy haingam-pihetseham-po momba ny votoaty mila ampiasain'ny mpanjifa ny fampiasana ny fikarohana SEO. Mba hahatratrarana izany dia nifidyhamaly ny fanontaniana apetraky ny olona hitadiavana fitaovam-piadiana sy hanadinadino ireo mpiasa mpanohana amin'ny hevitra maromaro.
2. Safidio amim-pahendrena ny karazan-tsoratra.
Rehefa nosoratana momba ny lohahevitra iray izay mitady mpikaroka amin'ny ankamaroany, ny endrika lavaMety ho tsara ny votoatiny. Ankoatra izany, tokony hampidirina amin'ny fiteny izay ampiasain'ny mpitsidika ny votoaty toy izany. Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hamaritanaNy karazana votoaty tsara indrindra dia amin'ny fandaminana ireo lohahevitra izay tsara laharana amin'ny Google.
3. Aza adino ny mampiditra ny lahatsoratra manoritra.
Na dia manam-pahaizana hatrany aza ny milina fikarohana, dia mbola mila izany izy ireosoratra manasongadina mba hanampiana azy ireo hahatakatra ny votoatiny, ny toe-javatra ary ny sary ao anaty lahatsary. Soraty foana ny infografika ary ampidiroIreo mari-pamantarana misy ireo hevi-dehibe izay tianao hatao.
4. Aza hadinoina ny fivarotanao.
Mifikira amin'ny hevitra votoaty mifanohitra amin'ny tolotra sy vokatra omenao.Mety miteraka hevitra mazava izany. Na izany aza, ny mpikaroka dia liana mandrakariva amin'ny endriny maro, endriny, ary vokatra tsy misy farany. Noho izany,Aza avela mamorona votoaty ivelan'ny vaovao mifandraika amin'ny vokatrao..
5. Aza manoratra amin'ny fitantanana.
Soraty ho an'ny mpanatrika. Raha tsy mampiasa teny mitovy SEO toy ny raharaham-barotra ireo mpijery, dia mihazakazaka nyjargon ary mamorona votoaty miavaka amin'ny fampiasana fiteny sy tsotra. Na izany aza, raha miresaka momba ireo teny fanalahidy ianao dia nikarokarinao tany aloha tany dia nanapa-kevitraamin'ny votoatinao.
6. Tadidio ny hivarotra, moramora.
Ireo mpivarotra E-varotra dia tian'ireo mpivarotra mba hipetraka ao amin'ny tranokalany isaky ny mikaroka izy ireoAoka ho voataonan'ny votoaty misy. Na izany aza, indraindray dia ny votoaty izay miova fa tsy vokatra sy sokajy. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, mpivarotradia tokony hampiseho ny fomba hikarakarana na hampiasana zavatra, ary izany dia afaka mitarika ny mpitsidika hividy ilay vokatra.
7. Mifandraisa e-varotra sy votoaty.
Ny fifandraisana dia lalana manan-danja ho an'ny mpijery mba hiditra sy handany ny votoatiny. Ary koa,Izany dia manampy ireo fitaovana fikarohana mba hahatakarana ny dikan'ny faritra samihafa misy tranokala iray. Ampiasao ny lohatenin'ny lohapejy sy ny footer amin'ny fampifandraisana ny vaovao syny votoaty mba ahafahan'ny mpitsidika mahazo fampahalalana sy vokatra amin'ny mailaka.
8. Avereno ny votoaty ao amin'ny tranokalanao.
Raha te-hametraka ny votoatiny ianao dia ataovy eo amin'ilay tranokala iray ampiasainao amin'ny fivarotana vokatrafa tsy microsite. Ny mikrôsita dia tsy mahasoa amin'ny fampisehoana fikarohana voajanahary satria rohy ivelany izany.
9. Diniho ny votoatin-dresaka.
Ny votoatin'ny tranokalanao dia tsy mahasarika ny mpitsidika havanana foana. Amin'izany tranga izany,Ny mpivarotra e-varotra dia tokony handefa lahatsoratra. Izany dia atao amin'ny fanolorana ny votoaty ho an'ny tranonkala hafa izay mavesa-danja amin'ny tranokalan'ny tranonkala.
10. Mitandrema rehefa mamoaka votoaty syndika.
Mety ho toa vahaolana mahasarika anao ny famoahana lahatsoratra avy amin'ny loharano hafany tsy fahampian'ny loharano hamoronana votoaty manokana. Na izany aza, avy amin'ny fomba fijery SEO, io fihetsika io dia manimba ny e-varotra. Manampy olona izanyraha te hahazo toerana amin'ny fampiantranoana ny votoatiny ao amin'ny tranokalanao.